Niteraka Hatezerana Tao An-Tanàna Kely Ao Espaina Ny Herisetra Mihatra Amin’ireo Mpifindra Monina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Avrily 2013 12:50 GMT
Vakio amin'ny teny English, Italiano, Deutsch, Français, 日本語, polski, Español
Nazera avy eny ambonin'ny tetezana i Moulaye Ndiaye, mpivaro-mandeha sy teraka Senegaly ny andro mialoha ny fetibe Tomatina [es] 2012 ao Buñol, Valencia, ao Espaina. Teo am-pivarotana ny entambarotra nandritra ny fetibe i Moulaye no indro nisy tovolahy iray nangalatra ny solomasony aro-masoandro. Rehefa nangataka tamin'ilay tovolahy izy mba hamerina ny solomasony, dia tsy nahazo valiny mahafa-po, nanapa-kevitra niala teo amin'ilay toerana i Moulaye avy eo, ka voatositosika sy natsipy teny ambonin'ny tetezana eo amin'ny enina metatra miala amin'ilay toerany. Soa fa niaro azy ny kitapo teny an-damosiny sy ireo zozoro maniry teo amin'ny toerana nianjerany. Notsaboina maharitra nandritra ny iray volana tao amin'ny hopitaly Manises izy noho ny faharatrana anaty, taolan-tehezana tapaka sy ratra amin'ny taolan-damosina nahazo azy. Niteraka fahajambana teo amin'ny masony ankavanana sy ratra mahery vaika amin'ny tenda ary fahatapahan-damosina ny herisetra nihatra taminy ka tsy nahafahany hanohy hiasa intsony.
Moulaye Ndiaye. Sary avy amin'i Jesus Cisnes ao amin'ny lasprovincias.es. Nahazoan-dalana ny sary.
Niangavy ireo nahita maso ny fanafihana nahazo an'i Moualye Tao amin'ny bilaoginy [es], sy ny rindrin'ny Facebook-ny [es] ny Hetsika Manohitra Ny Tsifileferana mba hifandray amin'ny fikambanana hahafahany manokatra fanadihadiana momba ity raharaha ity, satria tsy tratran'ny polisy ireo mpiherisetra izay nandositra ny alin'ny zava-niseho. Nisy ihany koa ny fanentanana maro natao tamin'ny olom-pirenena [es], izay mbola mitohy ankehitriny, ary nilaza ireo mponina ao an-tanànan'i Buñol fa raiki-tahotra noho ity tranga mampahonena ity
Niezaka nanampy an'i Moulaye i Angel Galán, mpandrindra ny Hetsika Manohita Ny Tsifileferana [es], sy i Salva La Cruz, mpitondratenin'ny cear.es [es]. Amin'ity fanamarihana eto ambany eto, nanadihady momba ny olana atrehin'ireo mpifindramonina izy ireo mikasika ny fanovana momba ny politikam-pahasalamana napetraka vao haingana izay tsy manome fanampiana ho an'ireo mpifindramonina tsy manan-taratasy ara-dalàna:
Toerana nitrangan'ilay herisetra tao Buñol. Sary avy amin'i Sara Serano, nahazoan-dalana:
39 taona i Moulaye ary nonina tao Espaina nandritra ny 6 taona izy ary tsy nanana taratasy ara-dalàna; midika izany fa araka ny didim-panjakana-lalàna vaovao 16/2012 (BOE 24 Aprily 2012), nisy ny fikasana hitaky vola taminy tamin'ireo fitsaboana azony. Mihevitra ireo tompon'andraikitra namolavola ity lalàna vaovao ity fa mahazo tombony amin'ny rafi-pahasalamana ireo mpifindramonina izay tsy mandoa hetra.
Araka ny filazan'ny Dokoteran'ny Tany (Doctors of the World) [es] mifanipaka amin'ny zo iraisam-pirenena sy ny fifanekena nosoniavin'i Espaina ny fanovana.
Mihevitra kosa i Mónica Garcia ao amin'ny Tambajotra Acoge [es] fa “manampy amin'ny alalan'ny hetra tsy mivantana aloany ireo olona tsy manana taratasy ara-dalàna amin'ny fihazonana ny rafi-pahasalamam-bahoaka.”
Tamin'ny 23 Febroary 2013, nambara tamin'ny vahoaka ny fahafatesan'ilay vehivavy Boliviana rehefa avy noroahina indroa misesy tao amin'ny foibem-pitsaboana izy satria tsy nanana taratasy ara-dalàna [es]. Nisy avy eo ny fanangonan-tsonia natao tao amin'ny change.org ho fangataham-panazavana.
Araka ny filazan'ny Caritas [es], “mbola ambaranay indray fa tsy ny krizy ara-toekarena ihany no nahatonga izao toe-javatra izao fa ireo rafi-panavaozana sy fanamafisana ny fiarovana ara-tsosialy ihany koa, izay nahafadiranovana ireo sarangan'olona fadiravona sy mitoka-monina indrindra eo amin'ny firahamonina” :
Nilaza i Moulaye fa tsy mieritreritra afa-tsy ny hanohy ny fiainany izy. Tsy mitàna lolom-po amin'ny olona nanafika azy izy. Te-hisaotra ireo olona nanampy azy ihany koa izy: ireo mponina ao an-tanàna, ireo Fikambanana tsy miankina, ny ben'ny tanànan'i Buñol izay niantoka ny lany tamin'ny fitsaboana ny tendany sy ny lamosiny. Nangataka fanampiana tamin'izy ireo amin'ny fahazoana taratasy ara-dalàna ihany koa izy. Araka ny nambaran'i Ángel Galán, mpandrindra ny hetsika Manohitra Ny Tsifileferana (tsifahazakana) ao Valencia, nomena fahazoan-dalana vonjimaika hijanona ao an-toerana izy noho ny antony manokana, saingy raha tsy misy ny fandraisana fanapahan-kevitra hentitra, hiha-sarotra ny momba azy.
Ny azo antoka dia manipika mazava tsara ny lalàna momba ny Vahiny (mpifindra monina) fa raha hanavao ny taratasy fahazoan-dalana hiasa, tokony nahaloa vola fiarovana ara-tsosialy enim-bolana farafahakeliny na aminà tranga hafa manokana. Midika izany fa tsy ho afaka hanavao ny taratasy fahafaha-mivahiny mihitsy ireo mpifindra monina tsy an'asa ary hijanona ho mponina tsy manana taratasy ara-dalàna.
Very fanahy i Moulaye Ndiaye mieritreritra fa mbola hijanona ho mponina “tsy ara-dalàna” hatrany izy miaraka amin'ny fahasembanana mahazo azy.